Akwụkwọ ọgụgụ maka B2B Ahịa Onlinentanetị | Martech Zone
Nke a bu ezigbo ihe omuma banyere atumatu ndi mmadu nyere site na ihe obula atụmatụ azụmaahịa azụmaahịa na-aga nke ọma. Ka anyị na ndị ahịa anyị na - arụ ọrụ, nke a dịkarịrị anya na nkenke njikọ anyị niile.
Nanị eme Re ahịa ntanetị B2B agaghị eme ka ihe ịga nke ọma dị elu yana webụsaịtị gị agaghị aga ahịa na-emepụta ahịa ọhụụ n'ihi na ọ nọ ebe ahụ ma ọ dị mma. Chọrọ usoro ziri ezi iji dọta ndị ọbịa ma gbanwee ha na ndị ahịa. Enwere ọtụtụ akụkụ na-agagharị na mmemme B2B na usoro ọgbọ na-eduga, yabụ, anyị mepụtara ihe omuma a iji nyere gị aka iji anya nke uche hụ ihe mejupụtara yana usoro niile. Tim Asimos, Gburugburu Studio.
Otu mpaghara m kwenyere na ọ nwere ike iji ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ dị na mpaghara Ọdịnaya Ọdịnaya. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ịnye azịza, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ enwere ike ịme iji nwekwuo ntụkwasị obi na ikike nke akara ntanetị. Gbalịa ile ọdịnaya gị anya n'ụzọ dimkpa… kedụ atụmanya chọrọ enyemaka? Kedu ihe ndị ahịa chọrọ? Kedu ihe bụ ọdịiche gị na ụlọ ọrụ ahụ? Kedu otu ọdịnaya gị nwere ike isi nyere ndị ọrụ gị aka? Ndị na-etinye ego gị ma ọ bụ ndị nwere ike itinye ego?
Ajụjụ ọnụ banyere idu ndú na isiokwu na-eduga ụlọ ọrụ mbipụta nwere ike iru mmata ma debe ụlọ ọrụ ahụ dị ka onye ndu na ụlọ ọrụ gị. Nyocha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ime ka visibiliti na ntụkwasị obi nke ika ahụ niile. Ọ bụghị naanị ọdịnaya dị na saịtị gị ka ọ dị mkpa - a na - ekesa ma bulie ọdịnaya na saịtị ndị ọzọ ebe edobere ndị na - ege ntị ịchọrọ ịga.
Tags: ule ulentinyeAnalytics-aza,ndị na-ege ntịMmatab2b ndị na-eme mkpebindị ahịa b2bblog postsịde blọgụụba ọnụegozụta nduonye zụrụ yaasịwo profaịlụkpọọ ka ememmepe mkpọsanjikwa mkpọsaikpe ọmụmụpịa-site ọnụegopịa-na-akakabarede ọnụegoechichentụgharị ntụgharịmgbanwentụgharị emepụtaraụlọ ọrụ ịde blọgụọnụ ahịa maka onye ahịa ọ bụlaụgwọ kwa ndumwekota crmctactrnnyefechọpụtaraederedeziga n'ihuemail Marketingakwụkwọ akụkọnjikọ akanyocha-eso ụzọusoroaga n'ihuntọalaeme nduihe mgbaru ọsọeto utonduzinjikọ inboundndeputa peejimmasịigosi ihe ngosikpismbido peeji nkendu ntụgharịndu nduedu ọgbọna-edu ọgụgụ isindu nurturingndu akarandu-ahịaeduamasịndepụta nkewanyocha ahịaakụrụngwa ahịaInfographics Ahịaekwukasị ewu ewummkwnleta ọhụụakwụkwọ akụkọntuziaka n'ịntanetịemeghe ọnụegonyocha ọchụchọkwụọ ụgwọ kwa Pịaprofaịlụ mmaduatụdoPodcastsbiputere echicheppczuoajụjụna-ekwu urlsakụkọretargetingnjigidenletaghachiezipụafọ ojujusearch engine njikarịchaChọọ MarketingnkewaAmbakSocial Media Marketingsqlọnụego ndebanye ahadebanyere ahaokporo ụzọ ntụgharịokporo ụzọ na-emepụtaọgbọ okporo ụzọokporo ụzọNdị ọbịa pụrụ ichewepu ahana-akpali akpalivideosesenowo na-ahịaesenowo-to-nduntughari-onye-ndu ntụgharịwebinarsweebụsaịtịwhitepapers